Nhasi kunopemberera makore makumi maviri ekuberekwa kwaHarry Potter | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Mabhuku, Literature, Noticias
Izvo zvisikwa zvemashiripiti zvese zve Harry Potter akazvarwa pazuva rakaita nhasi, a 26 yeJune, Inoita zvine mutsindo Makore makumi maviri… Ndiani angati! Nguva inopfuura nekukurumidza, uye kwete chete kune vanhu sekuiona kwatinoita, asi zvakare nemabasa makuru ezvinyorwa senge ino, iyo yaibata vateereri vechidiki kumabhuku.
Yakanga iri mu 1997 apo JK Rowling akaburitsa rake rekutanga basa, yakanzi "Harry muumbi nedombo reMuzivi". Nezvo nyika yese yezvitsinga yaizotanga, Muggles, ndima dzakavanzika uye zvisikwa zvemashiripiti. Munyori haana kufungidzira kuti basa rake rehudiki raizowana budiriro yakadaro, ndoda kuti aizove mumwe wevanyori vanobhadharwa kwazvo nhasi.
Harry Potter aisazo verengerwa chete nevana nevechidiki kutenderera pasirese, asi zvakare vakuru vazhinji vangade iyi inoshamisa nyaya yemashiripiti. Iyo icing pekeke yaive apo payakaendeswa kumafirimu uye ivo vakasangana nezvinotarisirwa zvemabhuku zvakanyatsonaka, zvichisiya vese vaverengi nevataridzi vachifara.
Tevere, isu tinoputsa zvishoma iyo iyo harry muumbi zvese uye isu tinoburitsa imwe isinganyatso kuzivikanwa data, isu tinokuudza iwe mune zvakateedzana zvakaburitswa zvakaburitswa, mugore ripi rakaunzwa kuunyanzvi hwechinomwe uye rumwe ruzivo rwatinotarisira uye tinoshuvira kuti richava rwekuda kwako.
1 Akabudiswa mabhuku
1.1 Ndeapi makore akaendeswa kumamuvhi?
2 Harry Potter zvinonakidza chokwadi
3 Harry Potter, yakazara franchise yemabhenefiti
4 Ndeupi waunofarira hunhu?
Aya ndiwo mabhuku anoumba iyo Harry Potter zvinyorwa zvinyorwa uye yavo odha yekuburitsa:
"Harry muumbi nedombo reMuzivi" (1997).
"Harry Potter uye Mutambo wezvakavanzika" (1998).
"Harry Potter uye Musungwa weAzkaban" (1999).
"Harry Potter neGoblet yeMoto" (2000).
"Harry Potter uye iyo Order yePenieni" (2003).
"Harry Potter uye Hafu-Ropa Muchinda" (2005).
"Harry Potter uye iyo Inouraya Hallows" (2007).
"Harry Potter neMwana Akatukwa" (2016).
Ndeapi makore akaendeswa kumamuvhi?
Aya mabhuku akaunzwa kumafirimu nenzira inotevera:
"Harry muumbi nedombo reMuzivi" (2001).
"Harry Potter uye Mutambo wezvakavanzika" (2002).
"Harry Potter uye Musungwa weAzkaban" (2004).
"Harry Potter neGoblet yeMoto" (2005).
"Harry Potter uye iyo Order yePenieni" (2007).
"Harry Potter uye Hafu-Ropa Muchinda" (2009).
"Harry Potter uye iyo Inouraya Hallows" - 1 chikamu (2010).
"Harry Potter uye iyo Inouraya Hallows" - Chikamu 2 (2011).
Harry Potter zvinonakidza chokwadi
Chokwadi unoziva akawanda eaya data, asi pamwe vamwe vatiza iwe kusvika zvino. Heano zvimwe zvinonakidza chokwadi iwe zvaungave kana zvausingazive nezve iyo Harry Potter saga:
JK Rowling, munyori wenyaya dzinozivikanwa dzekunyora, aive akamirira chitima chakange chaputsika munzira kubva kuManchester kuenda kuchiteshi cheLondon. Muchinjikwa waMambo muEngland muna 1990 paakauya nemutambi mukuru webhuku iri: Harry Potter.
Munyaya yacho tinogona kuwana mavara mazhinji, handiti? Zvakanaka, mazhinji emazita avo anobva maguta echirungu chaiko.
Arthur Weasley paanotora Harry Potter neshamwari dzake kuna Gurukota reMashiripiti, anofanira kufona kodhi yakavanda parunhare. Ichi chi "62442" netsamba dzinomiririra iwo manhamba mune nhare taizoverenga izwi 'mashiripiti' (Mashiripiti).
ari hogwarts imba inoenderana nezvinhu zvina: gryffindor moto, slytherins imvura, ravenclaw Imhepo uye pakupedzisira, hufflepuff Pasi.
JK Rowling, ndiye Mukadzi wechitatu akapfuma kuBritain uye yekutanga muScotland.
ari madhimoni havaberekane asi vanowanda sehowa munzvimbo dzine hurombo nenhamo.
Rimwe nerimwe remabhuku ari musaga "Harry Potter" ivo vakave rakashandurwa mumitauro makumi manomwe pasi rose
Chiratidzo chezodhiac che Harry Potter ndiLeokubvira akaberekwa muna Chikunguru 31, 1980.
Ruzivo rwekutanga "Harry Potter neRuzivo Philosopher" rakadhindwa muna 1997 kudhindwa kwemakopi mazana mashanu chete.
Pakutanga, zvaifungidzirwa kuti Ishe Voldemort aive iye chaiye baba vaHarry Potter. Munyori waro JK Rowling akazviramba.
Harry Potter, yakazara franchise yemabhenefiti
"Harry Potter neDombo reMuzivi", bhuku rekutanga, rinogona kuve muenzaniso wetariro kune avo vanyori vadiki vasina kuburitswa kekutanga kubvira parakarambidzwa nevaparidzi vakati wandei risati raburitswa neBloomsbury Publishing muna Chikumi 26, 1997.
JK Rowling anoda nyika yemashiripiti sezvo kwete chete Harry Potter akagadzirwa naye asi iye zvakare ane vamwe vatatu vakatenderedza iwo iwo dingindira "Ngano dzeBhededhi Bard", "Anoshamisa Mhuka uye Kwaungawana", "Quidditch Kuburikidza neMazera".
Inofungidzirwa kuti yakazara, kutengesa kwayo kwepasirese kunosvika kumamirioni 110 emakopi. Ndosaka ari mumwe wevanyori vanobhadharwa kwazvo nhasi!
Ndeupi waunofarira hunhu?
Tese isu tateedzera zvese zvinyorwa uye zvemafirimu saga yaHarry Potter tine hunhu hunodiwa, handiti? Ndezvipi zvako? Kutora mukana wezvose Fans Isu tiri mune mhanza, isu tinoda kuziva kuti ndiani waunofarira hunhu uye kana ukashinga, tiudzewo kuti ndeupi anonyanya kuvengwa kwauri.
Unhu hwangu hwandinofarira, pasina mubvunzo, ndiye mudzidzisi Severus Snape, ingangoita nguva dzose "fungidziro" mumatambudziko akakomberedza Harry Potter neshamwari dzake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Nhasi kunopemberera makore makumi maviri ekuberekwa kwaHarry Potter
Spain senge mamiriro ari munhau nyowani yaDan Brown, "Origen"